तपाईंको दैनिक जीवनमा भिजेको बदाम खानेका फाइदाहरू - डाइट
भिजेको बादाम खाने को फाईदा आफ्नो दैनिक जीवन मा ल्याउनुहोस्
भिजेको बादामहरू सजिलैसँग तयारी गर्न सकिन्छ। तिनीहरूलाई तपाईंको आहारमा थप्नुहोस् र तपाईंको जीवनमा भिजेको बादामका फाइदाहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
याद गर्नुहोस् कसरी, तपाइँको स्कोल्डेजमा, तपाइँको आमाले तपाइँ विद्यालय छोड्नु अघि तपाइँको मुखमा केही भिजाएको बादामलाई बाध्य पार्नुहुनेछ? वा कसरी तपाईं आफ्नो टिफिन बाकस खोल्नुहुन्छ, र भित्र भरे बदामको साथ अर्को सानो बक्स फेला पार्नुहोस्? के उनले चिन्ता गर्नुभयो? तपाईंले किन केही भिजेको बादामहरू खानु भयो? तिम्री आमाले भिजेको बादामका फाइदाहरू जान्दछन् जस्तो हाम्रा सबै आमाहरू र हजुरआमाले गर्छन्। हामी यहाँ तपाईलाई बताउन को लागी पिढि पुस्ताका परिवारहरूले भिजेको बदामको फाइदा किन किन्यो भनेर राम्ररी नबुझीकन किन उनीहरूले उनीहरूलाई खाने को पक्षमा वकालत गर्यो।
बदामको कडा र कडा बनावट छ जसले पचाउन गाह्रो बनाउँछ। भिजाउन बदामले तिनीहरूलाई नरम बनाउँदछ, तपाईंको शरीरलाई पचाउन र बिग्रनको लागि उनीहरूलाई सजिलो बनाउँदछ। भिजेको बदामहरू चबाउन सजिलो छ, यसैले यसले नटको पोषक उपलब्धता बढायो।
भिजेको बादामका फाइदाहरू धेरै हुन्छन्। भिजेको बादामहरू फूड चार्टको अन्डररेटेड चैम्पियन हुन्। र त्यहाँ भिजेको बदामका यी लाभहरू आफैंलाई प्राप्त गर्न धेरै सजिलो उपायहरू छन्। चाहे तपाईं बीचमा खाजा खाजा चाहनुहुन्छ वा तपाईं चाहनुहुन्छ तपाईको मिठाई को सजावट , भिजेको बादाम जाने बाटो हो! यी साना नटहरू लुकेका पौष्टिक पदार्थले भरिएका छन् कि हामी पत्ता लगाउन लागेका छौं, र तिनीहरूलाई भिजाएर तिनीहरूको पूर्ण शक्ति दिनुहुन्छ।
हामीले भिजेको बादामका फाइदाहरू सूचीबद्ध गरेका छौं, त्यसैले तपाईंलाई थाहा छ तपाईंले आज रातभरि एक मुट्ठी भिजाउनुपर्नेछ।
१ वजन घटाउन सहयोग गर्नुहोस्
दुई सेल क्षति विरुद्ध बचाउनुहोस्
3 Magnesium को पूर्ण छन्
चार तल्लो कोलेस्ट्रोल स्तर
।। मस्तिष्क समारोह बूस्ट गर्नुहोस्
। तपाईंको छालाको लागि राम्रो छ
।। प्रायः सोधिने प्रश्नहरू
१. वजन घटाउन सहयोग गर्नुहोस्
बदाम कार्बोहाइड्रेट कम र प्रोटीन र फाइबर उच्च, तपाईं munchies जब को लागी एक महान खाजा बनाउने। प्रोटीन र फाइबर पूर्णता को भावना बढाउन को लागी, तृप्ति को, को लागी केहि केहि तपाइँको आवश्यकता को कम गर्न को लागी परिचित छन्। यदि तपाइँ तपाइँको भोक र खान चाहानुहुन्छ भनेर चाहानुहुन्छ, केहि भिजेको बदामलाई चलाउनुहोस्! केही अध्ययनहरूले यो सुझाव पनि दिन्छ कि नट खानेले थोरै चयापचयलाई बढावा दिन सक्छ, जसले उनीहरूलाई प्रभावकारी तौल घटाउने आहारको लागि ठूलो थप बनाउँदछ।
सुझाव: बिहानको केही भिजाइएको बदामaमा बिहान खानु उत्तम हुन्छ दैनिक हिसाबमा , दिन को लागी तपाइँको क्यालोरिक सेवन घटाउन मद्दत गर्न।
२. सेल क्षतिबाट जोगाउनुहोस्
बदामको खैरो लेयरयुक्त छाला शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्टमा अत्यन्त धनी छ। एन्टिआक्सिडन्टहरू, विशेष गरी भिटामिन ई, तपाईंको कोषहरूलाई ऑक्सीडेटिव क्षतिबाट जोगाउन परिचित छन्। ऑक्सीडेटिव क्षतिको कारण छालाको क्षति र बुढो हुन्छ। एन्टिऑक्सिडन्टहरूले बुढेसकालका लक्षणहरूलाई कम गर्दछ छालाबाट तपाईलाई बचाऊ क्षति कसैले भन्न सक्दछ कि भिजेको बादाम युवावस्थाको अमृत जस्तै हो!
सुझाव: पौष्टिक सेवन अधिकतम गर्न ठीकसँग च्यु गर्नुहोस्। अध्ययनले भन्छ कि बदामलाई साना टुक्रामा पारेर (च्यूइ)), अधिक पोषकहरू छोड्ने र अवशोषित गर्न अनुमति दिन्छ, विशेष गरी स्वस्थ बोसो।
Mag. मैग्नीशियम पूर्ण छन्
भिजेको बादाम मैग्नीशियमको एक राम्रो स्रोत हो। यो सिफारिश गरिन्छ कि कम रक्तचाप हुनेहरूले बदाम खानु किनभने मैग्नीशियमको कम स्तर उच्च रक्तचापसँग जोडिएको छ। बदामको उपभोगले म्याग्नीशियमको स्तर सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्दछ जसले बदलामा रक्तचाप नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ। म्याग्नेशियमले मेटाबोलिक सिन्ड्रोम र टाइप २ मधुमेहका लागि ठूलो सुधारहरू पनि प्रस्ताव गर्दछ। म्याग्नेशियम एक आवश्यक खनिज हो जुन मानिसहरूलाई उनीहरूको शरीरमा चाहिन्छ, तर तिनीहरू प्रायः यस बारे सचेत हुँदैनन्!
सुझाव: कार्बोहाइड्रेट-भारी खाना खान अघि एउटा औंस बदामको परिणामले टाइप २ मधुमेह भएका बिरामीहरूको लागि खाना पछिको ग्लुकोजको स्तरमा %०% ह्रास हुन सक्छ।
Lower. लोभ कोलेस्ट्रोल स्तर
धेरै व्यक्तिहरू गल्तीले विश्वास गर्दछन् कि कोलेस्ट्रोल हाम्रो शरीरका लागि नराम्रो छ, तर वास्तवमा दुई किसिमको कोलेस्ट्रॉल राम्रो र नराम्रो हो। खराब कोलेस्ट्रोल जस्तो LDL मुटु रोग र धेरै गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था संग जोडिएको छ। भिजेको बादाममा उच्च स्तरमा असंतृप्त फ्याट हुन्छ जसले एलडीएल कोलेस्ट्रॉललाई कम गर्दछ एचडीएल, लाई कायम राख्दै राम्रो कोलेस्ट्रॉल । एक मुट्ठी खाने हरेक दिन बदाम खराब कोलेस्ट्रोलमा हल्का कटौती गर्न सक्दछ, हृदय रोगको जोखिम कम गर्न र मुटुको स्वास्थ्यलाई बढावा दिन।
सुझाव: तपाईंको परिवारमा बदामको उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्न बदाममा आधारित स्न्याकहरू पकाउनुहोस्।
B. मस्तिष्क समारोह बढावा
यो पुरानो हो तर गुडी! हामीले हाम्रो आमाबुवा र हजुरबा हजुरआमाबाट सुनेका छौं कि बादामले तपाईंलाई चलाख बनाउँदछ, उनीहरूले तपाईंलाई परीक्षाको दिनमा बदाम खान पनि लगाए, तर कसैले पनि यस विश्वासको पछाडि विज्ञानको खोजी गरेन! यहाँ किन बादाम खाने, वास्तवमै खेती गर्ने राम्रो बानी हो: बदाममा उपस्थित भिटामिन ई, संज्ञानात्मक गिरावट रोक्नको लागि देखाइएको छ। यसले मेमोरी कायम राख्न पनि मद्दत गर्दछ। अध्ययन पनि हाइलाइट गरिएको छ बदाम को फाइदा राम्रो मस्तिष्क समारोह को लागी।
सुझाव: तपाईंको भिजेको बदामको साथ एक गिलास तातो हल्दीको दूध पिउनुहोस् - यो भारतीय परिवारको पवित्र जोडी हो। हल्दी दिमागको प्रकार्यमा उमेरसँग सम्बन्धित घट्न ढिलाइ गर्न प्रभावकारी मानिन्छ, जबकि बदामले तपाईंको स्मृतिलाई सुधार गर्दछ!
Your. तपाईको छालाका लागि राम्रो
यो अर्को क्लासिक हो जुन तपाईको हजुरआमाको घर बनाउने सुझावहरू र युक्तिहरूको किताबबाट आउँदछ। बदाममा आधारित अनुहार प्याक एक उत्तम विधि हो तपाईंको छाला स्वस्थ राख्नुहुन्छ । महिलाहरूले शताब्दीयौंसम्म यस उमेरको सुन्दर उपचारमा निर्भर छन् (रसायनिक आधारित अनुहारको मास्कहरू राम्रा प्याकेजिंगको साथ अस्तित्वमा आउनु भन्दा पहिले) आफ्नो छालालाई पुनर्जीवित पार्न। एक बदाम अनुहार मास्क पोषण र बुढेसकाल को संकेत कम गर्न को फाइदाहरु संग आउँछ।
यहाँ एक आधारभूत भिजेको बदाम अनुहारको मास्क छ जुन ग्यारेन्टी गरिएको मनपर्ने मनपर्ने हुन्छ: केही भिजाइएको बदाम र कच्चा दुध सँगै मिसाउनुहोस्, र तपाईंको अनुहार र घाँटीमा टाँस्नुहोस्। यसलाई सुकाउन अनुमति दिनुहोस्, त्यसपछि चिसो पानीले धुनुहोस्। यस प्याकको अनुप्रयोगले तपाइँको छालाको लागि चमत्कार गर्दछ, यसलाई सहज र मोइस्चराइज राख्दै। प्याक छालाको जलनको उपचार गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुझाव: भिजेको बादाम गर्न सक्छन् तपाईको कपालको लागि आश्चर्य साथै। भिजेको बदामको साथ कपालको मास्कको प्रयोगले तपाईंको कपालमा चमक र चमक थप गर्दछ। यसले तपाईंको कपालमा पौष्टिक तत्त्वहरू प्रदान गर्दछ, कपाल बिगार्ने रोक्छ र कपाल पतन नियन्त्रण गर्दछ।
Q. के राम्रो छ: कच्चा बदाम वा भिजेको बदाम?
TO भिजेको बदाम र कच्चा बदामको बीच छनौट गर्नु स्वाभाविक विकल्प छनौट गर्नुको स्वादको कुरा मात्र होइन। बदाम भिजाउनेले उनीहरूलाई खाने कोठामा स्वादिष्ट वा पचाउन सजिलो बनाउँदैन, तर यसले पिलिन सजीलो बनाउँदछ। जबकि बादाम छाला एन्टीआक्सीडन्टहरूले भरिएको छ जसले खराब कोलेस्ट्रोलसँग लड्न मद्दत गर्दछ, यसमा टेनिन पनि हुन्छ। Tannin पोषक तत्व अवशोषण बाधा को लागी परिचित छ। बदाम भिजाउँदा पीलो निकाल्न सजिलो हुन्छ, यसले बदामलाई सबै पौष्टिक तत्त्वहरू सजिलै छोड्न अनुमति दिन्छ।
Q. भिजेको बादामहरू तयार पार्ने उत्तम तरिका के हो?
TO बादाम भिजाउनु एकदमै साधारण कार्य हो। बादामलाई कचौरामा राख्नुहोस्, एक कचौरा पानी (वा पानीको मात्रा जुन बदामलाई पूर्ण रूपमा ढाक्दछ) थप्नुहोस्, र तिनीहरूलाई चारदेखि पाँच घण्टा भिजाउन दिनुहोस्। Voila! तपाईंको भिजेको बादाम जान तयार छ। यो एक प्रविधि हो कि यदि तपाईंसँग आफ्नो हातमा धेरै समय छैन भने प्रयोग गर्न सकिन्छ। उत्तम तरिका, तथापि, भिजेको बादाम तयार गर्न केहि अधिक समय लाग्ने हो तर, फेरि, तपाईंको पक्षमा लगभग शून्य प्रयास समावेश गर्दछ।
एक मुठीभर बदाम एउटा कचौरामा राख्नुहोस्, बदाम पूर्ण रूपमा नछोडेसम्म न्यानो पानी थप्नुहोस्, र त्यसपछि एक चुटकी नुनमा छर्कनुहोस्। कचौरालाई कभर गर्नुहोस् र बादामलाई रातभर भिजाउन दिनुहोस् (आठ देखि १२ घण्टा)। अर्को दिन, बादामलाई सुक्खा र प्याट गर्नुहोस् तपाईंले सुन्न सुरु गर्नु अघि बदामलाई सुख्खा बनाउनुहोस्। यस प्रविधीले पोषण सेवन सुधार गर्न मद्दत गर्दछ जब तपाईं बदाम खान्नुहुन्छ।
Q. मैले कतिवटा भिजेको बादाम खानुपर्छ?
TO भिजेको बादामको तपाईंको खपत तपाईंको शरीरमा, तपाईंको भूक, तपाईंको दैनिक क्यालोरी आवश्यकता, र तपाईंको गतिविधिको स्तर जस्ता कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। सामान्य नियमको रूपमा, अधिकतम परिणामहरूका लागि, कम्तिमा आठदेखि १० भिजेको बदामहरू खानुहोस्।
भिजेको बादाम तपाईको दैनिक खानामा ठूलो थप छन्। तिनीहरू भिटामिन ई, आहार फाइबर, ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड, ओमेगा fat फ्याट्टी एसिड, र प्रोटीन जस्ता धेरै पोषकहरूमा धनी छन्। को धनी पोषक प्रोफाइल यो सुपरफूड के यो सबै उमेरका लागि एक पौष्टिक नट बनाउँछ!
यो पनि हेर्नुहोस्: बदामको तेलको पाँच फाइदा
रूसी र कपाल खस्नेका लागि उत्तम घरेलु उपचार
मध्यम कपाल को लागी कपाल कपाल
छिटो कपालको विकासको लागि प्राकृतिक सल्लाह